रुपमा गणतन्त्र सारमा राजशाही छ, लाेकतन्त्र छैन - हिमाल दैनिक
रुपमा गणतन्त्र सारमा राजशाही छ, लाेकतन्त्र छैन
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार २०:००
दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्वकर्ता तत्कालिन सात दलमध्ये सदभावना पाटी (आनन्दीदेवी) पनि एउटा थियो। जसको तर्फबाट आन्दोलनको क्रममा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने नेता थिए भरतविमल यादव।
दुई सय ३८ वर्ष पुरानो शाह वंशीय राजतन्त्र उन्मूलन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्ने अभियानमा सफलता हाँसिल गरेका उनी यादव त्यसपछि आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र विग्रहमा टिक्न सकेनन्। फलस्वरुप नेपालको राजनीतिमा कतिपय नयाँ नयाँ दल र नयाँ नयाँ नेताको अनुहारले स्थान ओगट्दै गए र संघर्षको मैदानमा खरो उत्रिएकाहरुलाई पाखा लाग्दै गए। यसरी पाखा परेका नेताहरुमध्ये एक हुन् भरतविमल यादव।
विगत एक दशक यता उनी कुनै राजनीतिक दलमा सक्रिय छैनन्। तर पनि देशको राजनीतिक गतिविधिकाबारेमा उनको चासो र चिन्ता रत्तिभर घटेको छैन। देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको ११ वर्ष हुँदैगर्दा हिमाल दैनिकले भरतविमल यादवसँग विगतदेखि वर्तमानसम्मको राजनीतिक विश्लेषणबारे कुराकानी गरेको थियो। प्रस्तुत छ भरतविमल यादवसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः
आजभोलि यहाँको दिनचर्या कसरी वितिरहेको छ?
एउटा राजनीतिक प्राणी भएपछि राजनीतिबाट टोटल्ली अलग हुन चाहेर पनि सकिँदैन। त्यसैले पार्टीगत राजनीतिमा नभएपनि राजनीतिसँग भने जोडिएकै छु। देश, छिमेकी देश, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक गतिविधिहरुको अध्ययनमा आफनो दिन विताइरहेको छु। त्यो अध्ययनको शिलशिलामा पुराना कुराहरु सम्झिँदै के सोचेका थियौँ, के भइरहेको छ भन्नेबारे आफैँमा आलोचना, समालोचना गरिरहेको छु। म कति ठिक थिएँ, र अहिले कति ठिक छु वा छैन भन्ने समिक्षा पनि गरिरहेको छु।
कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा नलाग्नुको कारण के होला?
With due respect भन्न चाहन्छु, कि म राजनीतिबाट विमुख पक्कै भएको होइन। त्यसमाथि मेरो पृष्ठभूमिको कारण पनि राजनीतिभन्दा बाहिर हुने कुरा कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो। तर, राजनीतिक दलबाट भने अलग भएको पक्कै हो। तपाईको प्रश्नको आधा जवाफ भन्नु पर्दा म कुनै पनि दलमा सक्रिय छैन।
यहाँको प्रश्नको जवाफमा म दुइवटा भनाई सम्झाउन चाहन्छु। एउटा प्रचलित भनाई छ कि Politics isadirty game, अर्थात राजनीति भनेको गन्धा खेल हो। यसैले स्वच्छ राजनीति गर्न चाहने मानिसहरु टिक्न गाह्रो हुन्छ। अर्को विश्वकै राजनीतिक इतिहास हेर्यो भने, खासगरी दक्षिण पूर्वी एशियाको राजनीति, त्यहाँको राजनीति षडयन्त्रै षडयन्त्रको खेल हो भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। हामी आफैँ नेपालको राजनीिित हेरौँ, राणाकालदेखि आधुनिक शाहकालको अध्ययन गर्यो भने इतिहासले देखाउँछ कि षडयन्त्रवीना राजनीतिमा सफल हुन साह्रै नै गाह्रो हुँदोरहेछ।
त्यति शक्तिशाली राजतन्त्रलाई पनि परास्त गर्न राजनीति आन्दोलनमा होमिएको व्यक्तिले अहिले राजनीति गन्धा खेल र षडयन्त्रको खेल भन्नुमा तपाईमा पलाएको निराशावादी सोचको परिणाम हो कि के हो?
यसलाई यसरी बुझौँ न, राजनीति वा कुनै पनि व्यक्तिमा हुने तत्कालिन सोच समय र परिस्थितिले नै निर्धारित गरिरहेका हुन्छ। यहाँले ०६२/०६३ को आन्दोलनको कुरा पनि गर्नु भयो, त्यो बेलामा मेरो सोच के थियो भने, हामी मानिस भएर बाँच्ने हो भने हाम्रो पनि केहि कर्तव्य र उद्देश्य छ। अर्थात आखिर हामी गुलाम भएर नै बसिराख्ने त?त्यतिबेला मेरो दिमागमा के थियो भने, होइन हामी जुन राजनीतिक हथकडीमा जकडिएका छौँ पहिले त्यो हथकडी फुकाल्नै पर्छ। त्यतिबेला राजनीतिक भन्दा पनि जनताको अधिकारको आन्दोलनमा हामी थियौँ। आन्दोलनको बेलाको सोच बेग्लै हुन्छ। त्यसको निश्चित उद्देश्य हुन्छ जुन गर्नै पर्छ। त्यतिबेलाको आन्दोलनमा के थियो भने, ०४६ सालमा हामीले संवैधानिक राजतन्त्र बनायौँ तर, त्यो राजतन्त्र जसलाई हामीले स्वीकार्यौँ, त्यसलाई अब संवैधानिक हिसाबले राख्न पनि ठिक छैन। यो संस्था नै निरंकुशताको प्रतिक हो त्यसैले यसको अन्त्य गर्नै पर्छ। त्यो अन्त्यगरी आम जनताको चाहना अनुसार लोकतन्त्र स्थापना गर्न पर्छ। जुन लोकतन्त्र समावेशी हुनु पर्छ। त्यसका लागि राज्यको पुनसंरचना आवश्यक छ भन्ने निर्दिष्ट उद्देश्य थियो। त्यो उद्देश्यका लागि मैले दिलो ज्यानले जति सके तन, मन र धनले लागेर अगाडि बढेको हुँ। त्यो परिवर्तन पश्चात मानिसहरुले भन्ने गर्छन नि मोक्षको कुरा, त्यो मोक्षको आनन्द अनुभूति गरेँ।
यस्तो सोच राख्ने व्यक्तिमा अहिले किन राजनीतिक सकृयतामा कमि हुन पुग्यो?
यो प्रश्न अति जायज प्रश्न हो। तर, आन्दोलनको सफलतापछि सत्ताको राजनीति सुरु हुन्छ। सत्ता अथवा कुर्सीको राजनीति हामीकहाँ पनि सुरु भयो। हामीले जुन उद्देश्यले लाग्यौँ के त्यो अब स्वार्थको राजनीतिमा लाग्नै हो त? यदि मलाई स्वार्थकै कुरा सोच्नु थियो भने, पैसा नै कमाउनु थियो भने, जुन अहिलेको राजनीतिमा देखिएको छ, हिँजोको त्यी चप्पलेहरु नेता बनेर कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यो भन्दा राम्रो अवस्थामा म हुन सक्दथेँ होला। हामीले नेता भन्ने मान्छेलाई अहिले एक लाखको जुत्ता चाहिने भएको छ। यहि नै हो नेताको असली चरित्र? महात्मा गान्धीलाई अहिले पनि हामी किन मान्छौँ र श्रृद्धाले पज्र्छौैँ? उहाँको सादा जीवन, उच्च विचारले न हो। अहिले पनि उदाहरण हेरे हुन्छ। विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागोस्, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफूलाई गरिवको छोरा भन्छन् तर, उनको रहनसहन, लगाई हेरौँ र पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री ममता वनर्जीको रहनसहन संचार माध्यममा हेरौँ न। उनले सुतीको साडी र चप्पल गाएर हिँड्छिन्। त्यसैले नेता त यस्तो हुनु पर्छ कि जसलाई आम जनताले हेर्दा अहो? हाम्रो नेता कस्तो राम्रो आचरण र रहन सहन। नेताको आचरण अनुकरणीय भयो भने त्यो नेता भयो, उसको आचरण देख्दा घृणा लाग्ने भयो भने त्यो नेता होइन। त्यसैले हाम्रो नेपालको राजनीति अनुकरणीय हुने बाटोमा नगएको हुनाले विभिन्न प्रकारका असामाजिक गतिविधि, भ्रष्टाचार छ त्यो सायद पञ्चायत कालमा पनि थिएन होला। अहिले त्यसलाई पनि माथ गर्दै अगाडि बढिरहेको छ।
अर्थात यहाँहरुले ०६२÷०६३ मा लिएको लक्ष्यअनुसार अहिले मुलुकको राजनीति अघि बढेको छैन?
त्यतिबेला हामीले जुन लक्ष्य लिएका थियौँ त्यसमा कुरा गर्दा नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरुले दुइटा शब्दावली प्रयोग गर्ने गर्छन् नि, ‘रुप र सारमा’ त्यहि अनुरुप रुपमा हामीले गणतन्त्र प्राप्त गर्यौँ। रुपमा हामीले लोकतन्त्र, संघीयता प्राप्त गर्यौँ तर, सारमा यी कुरा प्राप्त गरेका छौँ? गणतन्त्र रुपमा छ तर, गणतन्त्रको सारमा राजशाही नै छ। अर्थात हामीले जसलाई नेता भन्दै छौँ, जसलाई हामीले राष्ट्रको प्रमुख हो, राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख हो र उसलाई सम्मान गनुृ पर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरुको गतिविधि मूल्यांकन र मापदण्ड कसरी गर्ने? त्यसको मूल्यांकन र मापदण्ड उनीहरुको आचार, विचार र व्यवहार न हो। हेरौँ त हाम्रा नेता भनाउँदाहरुको व्यवहार र आचार के छ? यसले स्पष्ट पार्छ रुपमा गणतन्त्र सारमा राजशाही नै हो।
तपाईले गणतन्त्रमा पनि लोकतन्त्र देख्नु भएको छैन त?
लोकतन्त्र भनेको त जनताको सरकार हो। संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित हुने उल्लेख छ। तर, यो जनताको सरकार हो कि कुनै व्यक्ति विशेष अथवा राष्ट्रपतिको सरकार हो? यो राष्ट्रपति वा केपी ओलीजीको सरकार त होइन। बोल्ने कुरामा अलग होला तर, राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा फरक हुन्छ। वैधानिक र व्यवहारिक कुरामा फरक हुन्छ। वैधानिकताको सवालमा मेरो सरकार भन्न मिल्छ? अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको कुरा गर्दै भारतका राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो सम्बोधनमा ४२ कि ४४ पटक माइ गभर्नमेण्ट भने भन्ने सुनियो। कस्तो दुर्भाग्य, भारतको संविधान पढ्नु नि धारा ५३। जसमा कार्यपालिकाको शक्ति राष्ट्रपतिमा निहित हुने र त्यसको प्रयोग स्वयं राष्ट्रपति वा उसले तोकेको अधिकारीद्धारा गरिन्छ भनि हिन्दीमा लेखेको छ। यहाँ त कार्यपालिकाको शक्ति राष्ट्रपतिलाई कहाँ दिएको छ? कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग पनि होइन मन्त्रिपरिषदमा रहन्छ भन्ने छ जुन कुनै व्यक्ति विशेषमा हुँदैन। आम भाषामा भन्दा नेपाल सरकारमा रहन्छ भनि हाम्रो संविधानको धारा ७५ को उपधारा ३ मा उल्लेख छ। कतिपय अवस्थामा पुरानो नजिर पनि कानून सरह मानिन्छ। दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात कम्तिमा १० चोटी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा नेपाल सरकार भन्ने यसपाली किन मेरो सरकार भन्नु पर्यो त? भनेपछि There is something fishy or intensive oriented.
अर्थात नेपालमा गणतन्त्र आएपनि साँचो अर्थमा लोकतन्त्र आएन भन्ने हो?
लोकतन्त्र पनि रुपमा मात्रै आयो, सारमा आएन। लोकतन्त्र शब्द आफैँमा पूर्ण हुँदैन। निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा विधि हो तर, लोकतन्त्रमा यसका एक्टरहरुको आचरण पनि लोकतान्त्रिक हुनु पर्यो। लोकतन्त्र यहि हो कि कुनै पत्रकारले समाचार लेखेकै आधारमा उसलाई मुद्दा चलाउने, १५ वर्षसम्म जेल र १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने? मलाई थाहा छ कि हिँजोको आन्दोलनमा पत्रकारलाई तत्कालिन राज्यले नै आठौँ दलको रुपमा भन्ने गर्दथ्यो। यो परिवर्तनमा पत्रकारको पनि लेखेरमात्र होइन सक्रिय रुपमा सडकमै भूमिका थियो। अहिले आफ्ना कमजोरीबारे लेखे भने पत्रकारमाथि नियन्त्रणको गरी हिट्लरको शैली अपनाउने? राज्यको चौथो अंगलाई दबाउने कुन लोकतन्त्र हो? संविधानमा मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वा प्रेस स्वतन्त्रता भनेर मात्रै त हुँदैन। कम्युनिष्टकै शब्दमा रुपमा लोकतन्त्र आयो सारमा आएन।
आखिर त्यतिबेलाको आन्दोलनकै सहयात्रीमध्यकै दलले अहिले सत्ता र प्रतिपक्षमा छन्। त्यतिबेलाको भावना अनुसार नचल्नुको कारण यो व्यवस्था खराब भएर हो कि व्यक्ति?
कसैको नाम नलिइकन वीथ ड्यु रेस्पेक्ट एउटा कुरा भनौँ, यी दलका नेताहरु कोही १२, कोही १४ साल जेल वसेको यहि लोकतन्त्रका लागि होइन? नाम नलिइकन भन्छु र मलाई नाम लिन नभन्नुहोस्ः ६१ माघ १९ को कु पछि त्यस्तै १६÷१७ वर्ष जेल बसेका व्यक्तिहरु राजाको मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएका होइनन् र? त्यसैले हिँजोको रत्नाकर आजको बाल्मिकी पनि हुन सक्दछ र हिँजोको बाल्मिकी आजको रत्नाकर पनि हुन सक्छ नि। हिँजो आन्दोलनकारी थियो भन्दैमा आज भ्रष्टाचारी हुन सक्दैन भनेर कसले भन्न सक्छ? हिँजो सादा जीवन उच्च विचार भन्ने आज सत्तामा पुगेपछि एक लाखको जुत्ता चाहिने, तीन लाखको सुट, सुनको टाँक लगाउने? यहि हो नेताको आचरण? नेता त्यो हो जसको आचरण र व्यवहारका कारण सबैले सम्मान र आदर गर्छन्। एउटा दलको अध्यक्ष भएर नेता होइदैन। देशको प्रधानमन्त्री भएर नेता भइदैन।
अहिले तपाईलाई वहाँहरु लिडर जस्तो लाग्न छाडेर डिलर जस्तो लाग्न थाल्यो कि क्या हो?
हो!!! हामीले त्यतिबेलाको आन्दोलनमा अपेक्षा गरेका थियोँ कि अब हाम्रो देशमा पनि लिडर (नेता) हुन्छ तर, दुर्भाग्यवस नेताको सट्टा हामीले डिलर पाउने र बनाइरहेका छौँ।
६२ को आन्दोलनमा सक्रिय नभएर त्यसको मर्म नबुझेको कारण अहिलेको अवस्था आएजस्तो लाग्दैन?
मर्म नबुझेको भनेँ भने म नै बेबकुफ हुँला। अहिलेका राज्य प्रमुखहरुको राजनीति आजदेखि भएको होइन उनीहरुको पनि आफ्नै इतिहास छ। तर, शंका लाग्यो कि कतै यिनीहरुले आफ्नै इतिहासप्रति बेइमानी त गरिरहेका छैनन्? जनतासँग जुन वाचा गरिएको थियो त्यसलाई धोका त दिइरहेका छैनन्? यो शंकाको विषय बनेको छ। मलाई लाग्दछ, कि लोकतन्त्र, संघीयताको मर्म यो हो भनि नबुझेको त पक्कै पनि होइन। जानीबुझीकनै त्यसको वर्खिलाप हिटलरको शैलीमा गएको देखिन्छ।
एउटा राजा फालेर धेरै राजा भित्र्यायौँ भन्ने लागेको छ कि क्या हो?
हो हामीले एउटा राजा हटायौँ अहिले त गाउँ गाउँमै छोटे राजाहरु बने। संघीय सरकार होस् वा प्रदेश वा स्थानीय सरकार उनीहरुको रवाफ उस्तै छ। मैले अघि पनि भने, गणतन्त्र रुपमा आयो तर, सार र व्यवहारमा राजशाही नै फलो गर्दैछौँ। एक जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भन्दै थिए, अहिलेको न्यायप्रणाली पञ्चायतसँग तुलना गर्दै थिए। त्यो सुन्दा लाग्यो, पञ्चायतकालमा राजा वा दरबारको सवालमा बाहेक अन्य सवालमा अहिले भन्दा त्यतिबेलाको न्यायसम्पादन स्वतन्त्र थियो र जनतामा न्यायलयप्रति विश्वास थियो। अरु ठाउँबाट न्याय नपाएपनि अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने आस्था थियो। म आफैँ पनि ६२ को आन्दोलनमा डेढ महिना थुनामा राखेकोमा अदालतले छोडाएको थियो। तर, अहिले स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्न भनिएपनि यो कार्यपालिकाको छाया बनेको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका कोरा नारामा सिमित भएको छ।
के अहिले निर्देशित प्रजातन्त्रको बाटोमा गएको हो त?
अहिलेको राज्यको शैली हेर्दा त्यस्तै लागिरहेको छ। लोकतन्त्रमा हत्या हिंसाका अपराधीले कानुन बमोजिम दण्ड सजाय पाएका छैनन्। सुशासनको कुरा गर्छौ। तर के यहि हो सुशासन? पञ्चायतकालमा पोखरमा भएको नमिता सुनिता काण्ड हामीले कुरा गर्छौ अहिले त्यस्ता काण्ड त कति हो कति? न्यायलयको विषयमा त्यतिबेलाका पापडका सदस्य शम्भु थापा अहिले एउटा निवेदन लिएर संसदीय सुनुवाई समितिमा गए, अदालतमा गए तर, कहिँ सुनुवाई भएन।
भ्रष्टाचारको सवालमा नेताहरुले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्नेहरुको अवस्था देख्दा भ्रष्टाचार गर्यो रे भनि सुन्ने क्षमता बढाएको जस्तो छ। वाइड बडी काण्डदेखि सुन काण्ड, बालुवाटारको जग्गा जहाँ राज्यका तीनै अंगका प्रमुखको निवास छ। तर, भ्रष्टाचारको सीमा नाघिरहेको छ।
यिनै कारणहरुले गर्दा मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई धर्मराउने अवस्थामा त पुर्याउँदैन?
इन्टन्सनल्ली हो वा नाँच्न नजान्ने आगन टढे भएको हो थाहा भएन। तर, जुन किसिमको गतिविधि भइरहेको छ त्यसले परिवर्तन विरोधी पक्षले राजा आउ देश बचाउ भन्ने नाराको स्वर बढाउने अवसर पाइरहेका छन्। हुन त यो असम्भव नै छ। राजतन्त्र र गणतन्त्रको तुलनै हुँदैन। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो। यसका कमिकमजोरी सुधार्ने हो विकल्पमा राजतन्त्र खोजिदैन। तर, पनि जे जति संख्या छ त्यसमा अहिलेका शासकहरुको अकर्मण्यताले बढाउन मद्दत पुर्याइरहेको छ। जनतामा राज्य व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा बढाउने काम भइरहेको छ।
राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याएको यसले पनि अराजकतामा त धकेल्दैन?
वितृष्णाले त्यो सम्भावनालाई बल पुर्याउँछ।
यहाँले लामो समय मधेसको मुद्दामा राजनीति गर्नु भयो। अहिले के लाग्छ, मधेसका मुद्दा यथेष्ट रुपले सम्बोधन भयो जस्तो लाग्छ कि बाँकी नै छ?
म राजनीतिमा लागेको लोकतन्त्र र समाजवादका लागि हो। यसैभित्र मधेसको विषय पनि समावेश हुन्छ। लोकतन्त्रभित्र मात्रै वादको सम्भावना रहन्छ चाहे त्यो मधेसवाद भनौँ वा अरु कुनै। त्यसैले पहिलो अपरिहार्यता लोकतन्त्र त्यसपछि मात्रै मधेसवाद वा कुनै वादको कुरा आउँछ। सदियौँदेखि राज्यको मुलधारबाट अपहेलित भएर रहेको मधेसप्रतिको विभेद अन्त्य हुनु पर्छ। त्यसपछि चाहे मधेसी होस् वा पहाडे सबै एक हौँ र मधेस नेपालको अभिन्न अंग हो। नेपालमा मधेस हो, अलग राज्य होइन। त्यो मधेस पनि अधिकार सम्पन्न हुनु पर्छ भन्ने सैद्धान्तिक आडमा राजनीति गरेको हो।
यहाँहरुको राजनीतिमा प्रेरणाको स्रोत गजेन्द्रनारायण सिंहको विचारले सार्थकता पाएजस्तो लाग्छ कि त्यसप्रति गद्दारी भयो जस्तो लाग्दछ?
हामी जुन सामूहिक हितका लागि केन्द्रीत हुनु पर्ने थियो त्यो नभएर व्यक्तिगत लाभ हानीका आधारमा केन्द्रीत भयौँ, र मधेसप्रति समर्पण हुन सकेन जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ।
मधेसी जनताको हितका लागि के गनुृ जरुरी छ त?
अहिलेको संविधानका कुन कुन धारामा के के संशोधन गर्नु पर्छ गम्भिर अध्ययन गरी त्यसमा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। ता कि मधेसी जनतामा हामी मधेसी नेपाली नागरिक नै हौँ र नेपाल हाम्रो हो भन्ने भावनाको विकास गर्नु छ।
अहिले देशको भविश्य कस्तो देख्नु भएको छ?
आज राज्यका तीन प्रमुख अंगहरुः कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आफ्नो क्षेत्र र सीमाभित्र इमान्दार भएर क्रियाशिल भइरहेको अवस्था छैन। यसमा नेतृत्व तहमा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीमा नैतिकताको कमि छ र उनीहरु हिँजोको आन्दोलनको भावना विपरित गइरहेको अवस्था छ। यसले जनतामा वितृष्णा बढ्दैछ।
कुनै बेला सात दलको नेता तपाई अहिलेका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग भेटघाट वा कुराकानी भएको छ कि?
अन्यथा नलिने सर्तमा भन्नु पर्दा उहाँहरुबाट यस्तो अवसर मलाई प्राप्त भएको छैन।
भेट्ने अवसर पाए के भन्नु हुन्छ?
वितगमा क कसले के के गर्यो। अहिले त्यहि आन्दोलनका बलमा राज्यका उच्च तहमा पुगेकाहरुले हिँजोका सहयात्रीहरुलाई सम्झिनु पर्दैन? यहि हो त राजनीतिक धर्म?
Prevपछिल्लोअर्थमन्त्रीद्धारा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट पेश
अघिल्लोदेउवाले नै हावादारीको संज्ञा दिएको बजेट कस्तो होला?Next